सबैभन्दा मारमा अमेरिकी श्रमिक वर्ग - Aarthiknews
सबैभन्दा मारमा अमेरिकी श्रमिक वर्ग
अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो मुलुकको हित रक्षा गर्ने विश्वासका साथ शुरु गरेको चीनसँगको व्यापार युद्ध अन्ततः स्वयम् अमेरिकाकै लागि घातक हुने देखिएको छ । अब यो शृंखला अमेरिका–चीन सम्बन्धको एक विशेषताको रुपमा नै स्थापित हुने लक्षण देखापर्न थालेका छन् ।
यस्तो अनुमान किन पनि गर्न सकिन्छ भने दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिको कार्यशैली र कार्यसम्पादन पद्दति हालको द्वन्द्वको प्रमुख करणको रुपमा रहेको प्रष्ट छ, जहाँ व्यापारको विषय वास्तबमा गौण हो ।
वर्तमान विवादको सिलसिला अध्ययन गर्दा देखिन्छ कि अमेरिकी पक्षको अनावश्यक दबाब र चिनियाँहरुको कडा प्रत्युत्तरको एउटा लामो चरण यो व्यापार युद्धले पार गरिसकेको छ । ट्रम्पले सन् २०११ देखि नै चीनलाई मुख्य सत्रुका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । त्यसैबेला उनी भन्थे–‘यदि म राष्ट्रपति भए भने चीनलाई पछि धकेल्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन । अहिले उनी त्यही गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पले तीन सय बिलियन डलर बराबरको चिनियाँ वस्तु आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेसँगै चीनको प्रतिष्ठित हुवावे कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । अमेरिका हुवावेले विकास गरेको ‘फाइभ जी’ सँग मात्र होइन कि अन्य धेरै चिनियाँ उत्पादन र प्रविधिका कारण आत्तिएको देखिन्छ ।
ट्रम्पको शैली हेर्दा उनी आक्रामक व्यापारको लागि पहिले प्रतिस्पर्धीलाई धम्क्याउने, सम्झौताको वातावरण बन्नै नदिने, पछि हट्दै नहट्ने र अन्त्यमा जितेरै छाड्ने देखिन्छ । उनका पूर्ववर्तीले जस्तो समझदारीको गुन्जायस ट्रम्प प्रशासनमा अलिकति पनि छैन । तर, उनको निसाना किन सफल भइरहेको छैन भने चीन सदियौदेखि बलिया र निकृष्ठ सत्रुहरुसँग जुध्दै र परास्त गर्दै आएको मुलुक हो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा हत्पत सम्झौता गर्दैन ।
त्यसो त शितयुद्धको नयाँ स्वरुपमा व्यापार युद्धलाई परिभाषित गर्न अमेरिकाले थालिसकेको छ । माइक पोम्पेले त भनिनै सके, हुवावेसँगको संघर्ष भनेको इन्टरनेटको दुनियाँमा कम्युनिष्ट मान्यताले शासन गर्ने या पश्चिमी मूल्यको बर्चश्व रहने भन्ने नै हो । चीनले अमेरिकी डिस्र्कोसको जवाफ दिँदै व्यापार युद्धलाई नयाँ लङ्ग मार्च (लामो यात्रा) भन्दै चीनको आर्थिक विकासको बाटोको रक्षा आफ्नो प्रमुख स्वार्थ भएको घोषणा गरिसकेको छ ।
यसले के स्पष्ट पारिसकेको छ भने चीन अहिले जुन बाटोमा छ त्यसबाट थोरै पनि हट्ने सम्भावना छैन् । बरु उल्टै व्यापारिक लेनदेनको पारिस्पारिक स्वार्थ अघि बढाएर जापान र कोरियाजस्ता अमेरिकाकै नजिकका मित्रहरुलाई आफुतिर तान्ने प्रयत्नमा लागेको छ ।
फेरि पनि के चाहिँ स्वीकार गर्नैपर्छ भने अमेरिकाले थालेको व्यापार युद्धले चीनलाई ठूलै आर्थिक नोक्सानी हुनेछ । तर, अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि कम समस्यामा पर्ने छैन । अन्ततः अमेरिकाले नै बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको व्यापार युद्ध नितान्त प्राविधिक विषयमा मात्रै होइन् । न त अमेरिकाले उठाउँदै गरेको श्रमिकको अधिकार र चीनले अपनाएको अमेरिकी भटमास नकिन्ने नीतिमै सीमित रहन्छ । यसमा बहुआयामिक विषयहरु छन् । यो युद्ध एकले जित्ने र अर्कोले हार्नेमा टुंगिने अवस्था छँदै छैन । बरु अमेरिकन श्रमजीवी जनता अवश्य नै यसबाट प्रताडित बन्नेछन् ।
भन्नलाई त डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने गर्छन्, मैले अमेरिकन मजदूर वर्गकै हितको लागि यस्ता कदम चालिरहेको छु । तर, प्रश्न के हो भने कसरी भन्सार वृद्धिले श्रमिक वर्गलाई लाभ पुग्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अर्थशास्त्रका जो कोही अध्येता यो कुरामा सहमत हुनैपर्छ कि भन्सार कर बृद्धिले अमेरिकाको आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर पार्नेमा कुनै शंका छैन् ।
सैद्धान्तिक रुपले भन्नुपर्दा भन्सार कर वृद्धिको उद्देश्य घरेलु उद्योगलाई सहयोग पुर्याउनु नै हो । तर के आजको विश्वमा बाह्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात नगरी कुनै मुलुकमा ठूला उद्योग सञ्चालन सम्भव छ ? यदि छैन भने बढेको भन्सार करले कच्चा पदार्थकै मुल्य वृद्धि गरिसकेपछि घरेलु उत्पादनकै पनि मूल्य वृद्धि हुदैन ?
कतिपय ठूला उद्योगहरुजस्तै स्टिल कम्पनीहरुको रक्षाका लागि आयातित वस्तुमा कर बढाउनुले आम मानिसको जनजीवनमा त्यति ठूलो प्रभाव नपार्ला । तर, घरेलु प्रयोगका विद्युतीय उपकरणदेखि लिएर जुत्ता र पोशाकसम्ममा कर वृद्धि गर्दा त्यहाँका काम गरी खाने वर्गमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । सीमित आय भएका मजदूर वर्गले चरम आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति निश्चित रुपमा आउँछ ।
खाना, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुमा श्रमिक वर्गले गर्ने खर्च उनीहरुको कुल खर्चको प्रमुख हिस्सा हुन्छ । अमेरिकामा आधारभूत वस्तुको खपतको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा आयातित वस्तुले ओगटेको देखाउँछ । यसले स्पष्ट पार्ने कुरा यहि हो कि निम्न वर्गले उपयोग गर्ने समानमा ट्रम्पको नीतिले मूल्य वृद्धि गर्छ । अनि मारमा चाहिँ गरिखाने वर्गनै पर्छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेक त्यहीका कम्पनीहरुले उत्पादन गर्ने सामग्रीको समेत भन्सार दरका कारण मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ । अमेरिकाले बाह्य विश्वसँग गर्दै आइरहेको व्यापारमा समेत त्यसको असर पर्छ नै । अमेरिकाका कृषिजन्य उत्पादनको दोस्रो ठूलो उपभोगकर्ता मुलुक चीन हो । यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी कृषिजन्य उत्पादनको प्रयोगमा कटौती गर्न थालिसकेको छ । उसले अमेरिकी भटमास, मकै, कुखुराको मासु र बिफको प्रयोग घटाइसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर फेरि पनि अमेरिकन किसानलाई नै पर्ने हो । अनि सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने कृषि मजदुरहरु हुन् । सायद अर्बपति व्यापारी ट्रम्पले यो विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । जो एक नम्बरका हठि र मुडीका रुपमा विश्वभर परिचित छन् ।
ड्रग्स केसमा शाहरुख खानसहित चार नायक नाम जोडियो
कोरोनाको अमेरिकामा असर,डिज्नेले दुई राज्यबाट २८ हजार कामदार हटाउने
मुकेश अम्बानीको रिटेल कम्पनीमा फेरि अर्बौ लगानी थपिदै
सिटी एक्सप्रेसको चाड पर्ब अफर हरेक दिन १० हजार उपहार
निगम भन्छ- नेपाली पाइलटले नै धेरै तलब बुझ्छन्